Talata faharoa mandavantaona – Trinitera Malagasy
Tsy ankasa Hebrio 6, 10-20/Salamo 110/
Ankasa 1 Samoela 16, 1-13/Salamo 88/
Marka 2, 23-28
Mankamasina ny andro alahady, mivavaha fa aza miasa. Izay no nandikàna ny andinin’ny Teny Folo milaza hoe: Tsarovy ny andro sabata mba hanamasinanao azy, ho fahatsiarovana ny fitsaharan’Andriamanitra nahita fa vitany tsara avokoa ny zava-boahary ka nitso-drano ny Sabata (Eks 20, 8). Tsy izay ihany anefa fa mba hahafahan’ny mpiasa mbamin’ny biby fiompy ihany koa miala sasatra miaraka amin’ny tena (Eks 23, 12), fa indrindra indrindra hahatsiarovana fa efa mba nandevozina koa isika tany Ejipta fa navotan’ny tana-maherin’Andriamanitra kosa (Det 5, 12).
Fankalazana ny fandresen’Andriamanitra araka izany ny Sabata, ary rehefa tafatsangana ho velona i Kristy dia mankalaza azy sy ny fandresentsika miaraka aminy isika ny Alahady. Fahotana ny malahelo sy ny mandroretra ny alahady hoy ny Didascalie Apostolique (voasoratra ny IIIe siècle tany Syrie septentrional), izay nandrara ny fifadian-kanina sy ny fandoalihana amin’ny andro alahady fandresena no ankalazaina.
Na tamin’ny andron’i Jesoa aza dia nanjary lalàna manandevo fa tsy manafaka ny lalàn’ny Sabata. Mazava ny fanazavany: tsy ny olona no natao ho an’ny sabata fa ny sabata no natao mba hialan’ny olona sasatra sy hahafahany mankalaza ny fandresena miaraka amin’ny Zanak’olona. Mampalahelo anefa fa raha misy Kristianina iray faly sy ravo satria angaha hoe nandresy ny antoko politikany, mba jereo anie ny fomba ankalazana izany fandresena izany e, dia mila mandinin-tena isika hoe isak’alahady ve mba mifety sy mifaly, mba mi-poster ny fandresen’i Kristy eto am FB toy ny ataon’ny sasany amin’ny resaka politika, na amin’ny fandresena hafa rehetra?
Araka ny lalàn’i Moizy dia azo atao ny mihinana voaloboka izay lany ao amin’ny tanimbolin’ny hafa, ary azo atao koa ny mioty amin’ny tanana salohim-bary eny an-tsahan’ny hafa (Jereo Det 23,25-26). Ho fitsinjovana ny hafa izay mety ho maty noana no nanaovana izany. I Davida aza hoy i Jesoa nihinana ny mofo voatokana ho an’ny mpisorona irery ihany.
Ny fitiavana no mandavorary ny zavatra rehetra ary raha tsy voahaja ny zo aman-kasina, ny fiainana sy ny fahasambaran’ny tsirairay, dia tsy lalàna araka an’Andriamanitra intsony izay. Ny lalàna tsy mitsinjo ny soa ho an’ny hafa dia tsy sitrak’Andriamanitra. Izay nomena andraikitra hitantana sy hiandraikitra ao amin’ny Fiangonana dia tokony hahatsiaro izany mandrakariva. I Jesoa no tompon’ny Sabata. Raha tsy hovantsika ho fankalazana ny fandreseny ny lamesa sy ny fanompoam-pivavahana dia ho zary nanenjehana sy fifampiandaniana no hiafaran’ny fiainantsika ny maha-kristianina. Aoriana kely izy dia hanontany ny mpiandraikitra ny lalàna hoe: Inona no mety hatao amin’ny sabata, ny soa sa ny ratsy ny mamonjy aina sa ny mamono? (Mk 3,4).
Tsy hoe manana ny rariny ianao satria tsy miaina ny maha-izy azy ny tompon’andraikitra dia afaka manao izay tianao ianao. Tsy ny fananana ny rariny manko na ny fitsikerana no hanova ny fiainana sy hahasambatra azy, fa ny fahitana ny asa ataon’Andriamanitra ka hiderana azy. Tsy ho afaka ny hanova sy hanatsara ary ho tonga hazavana ho an’ny hafa izay tsy mbola nibanjina ny asan’Andriamanitra, ka hahita toa azy fa “tsara indrindra izany” (Jen 1,1—2,3).
Raha sanatria tsy mahatsapa tena ho efa nandevozina isika dia ho mpiavonavona ihany, satria tsy mba mila ny famindaram-pon’Andriamanitra ka tsy hankalaza velively ny fitiavany fa handany andro hitsikera sy hanaratsy ny hafa. Tsy hisy fandresena hankalazaina akory ami’ny Sabata sy ny alaohady. Hotsaroantsika ary fa isika koa dia efa mba nandevozin’ny fahotana, ka midera ny fahafahantsika (Det 5,12) ary mivavaka mba handresen’ny olombelona rehetra miaraka amin’i Kristy koa.